Izizathu ezintlanu ezingekho kwizindlu zasemakhaya
Ngaba i-Homeschooling Right You?
Ukuba ucinga ngemfundo yasekhaya, kubalulekile ukuba ucinge ngokugqithiseleyo ukuxhamla kunye nokuxhamla kwezindlu zasemakhaya . Nangona kukho ezininzi izizathu ezilungileyo zokufunda amakhaya , akuyona into efanelekileyo kuyo yonke intsapho.
Ndiya kunika izizathu ezi-5 zokungena kwindlu yasekhaya ngoba ndifuna ukuba ucinge ngeenjongo zakho kunye nezibonelelo phambi kokuba wenze isigqibo.
Ndiyibonile ngaphezulu kweyodwa ngelixa becebisa abazali malunga nokukhetha kwekharityhulam.
Abafuni abantwana babo kwisikolo sikarhulumente ngezizathu ezahlukeneyo, kodwa abafuni ngokwenene ukuthatha uxanduva lwemfundo yabantwana babo. "Ndikhangele into enokuyenza yedwa," bathetha. "Ndixakeke kakhulu ukuba ndichithe ixesha elide kule nto."
Izizathu ezi-5 eziphezulu zokungabi yizindlu zasekhaya
1. Umyeni nomfazi abavumelani ngokumalunga nemakhaya.
Kungakhathaliseki ukuba ufuna kangakanani ekhaya ukufundisa abantwana bakho, akuyi kusebenza kwintsapho yakho ukuba unayo inkxaso yowakwakho. Unokuba nguyena olungiselela nokufundisa izifundo, kodwa uya kufuna inkxaso yendoda yakho (okanye umfazi), zombini ngokomzwelo nangokwezimali. Kwakhona, abantwana bakho baya kuba nzima ukuba basebenzisane xa bengayiqondi into ebumbeneyo evela kumama noyise.
Ukuba wakho umlingani akaqinisekanga ngamakhaya asekuhlaleni, cinga ukuba unyaka wovavanyo. Emva koko, khangela iindlela zokufumana umzali ongeyomfundi obandakanyekayo ukwenzela ukuba ubone izibonelelo ezizimeleyo.
2. Awuzange uthathe ixesha lokubala iindleko.
Andiyathethi ngeendleko zemali zasemakhaya , kodwa iindleko zomntu. Musa ukukhawuleza kwisigqibo samakhaya asekhaya ngenxa yokuba abahlobo bakho benza, okanye kuba kubonakala ngathi kumnandi. (Nangona ingaba mnandi kakhulu!). Kufuneka ube nokukholelwa kunye nokuzibophelela kwakho okuza kuhamba nawe kwiintsuku xa ufuna ukukrazula iinwele zakho .
Ngenxa yentsapho yakho, ukuqiqa kwakho kufuneka kukugqithise iimvakalelo zakho.
3. Awufuni ukufunda umonde nokunyamezela.
Iimfundo zasemakhaya ngumbingelelo wexesha kunye namandla esekelwe othandweni. Kuthatha ucwangciso oluqinileyo kunye nokuzimisela ukuya kude. Ngeke ube ne-luxury yokuvumela iimvakalelo zakho ukuba uqinisekise ukuba okanye ungayi kubafundi basekhaya ngosuku oluthile.
Njengoko ixesha liqhubeka, uya kusolula, uphikelele, kwaye udangele. Uza kuthandabuza ngokwakho, ukhetho lwakho kunye nococeko lwakho. Ezi zinto zinikwe. Andizange ndidibane nabantwana besikolo abazange bajongane nabo.
Akudingeki ukuba ube nesineke esingaphezu komuntu ukuqala ikhaya lemfundo, kodwa kufuneka uzimisele ukukhulisa umonde-kunye nawe nabantwana bakho.
4. Awukwazi okanye ungafuni ukuhlala kwimali engenayo.
Ukunika abantwana bakho uhlobo lwemfundo abafanelwe, kuya kufuneka ukuba uceba ukuhlala kwikhaya elipheleleyo. Ndibukele umama azama ukusebenza ngexesha lemakhaya. Zolula ngeendlela ezininzi kwaye zivame ukushisa.
Ukuba uceba ukubamba umsebenzi wexeshana ngelixa ufundisa isikolo, ngokukodwa i-K-6, unokube ngcono xa ukhetha ukungena ekhaya. Xa abanye abantwana bekhulile, banokuzimelela ngakumbi kunye nokuziqeqesha kwizifundo zabo, bakhululwa ukuba ufumane indawo yexeshana.
Cinga ngenyameko kunye neqabane lakho naluphi utshintsho olufunekayo ukwenza isikolo sakho sibe yinto ephambili.
Ukuba kufuneka ufundele ekhaya kwaye usebenze ngaphandle kwendlu , kukho iindlela zokwenza njalo ngempumelelo. Cwangcisa kunye neqabane lakho kunye nabanokhathalela abanokuyenza njani ukuba isebenze.
5. Awuzimisele ukubandakanyeka kwimfundo yabantwana bakho.
Ukuba ingcinga yakho yangoku ekhaya ifundisa ukukhetha ikharityhulam abantwana bakho abanokuyenza ngokwabo xa ujonga inkqubela yabo ukusuka kumgama, oko kunjalo, oku kusebenza ngokuxhomekeka kwindlela ozimele ngayo umfundi ngamnye ngumfundi. Kodwa nangona ukuba bayakwazi ukuyisebenzisa, uya kulahleka kakhulu.
Andiyathethi malunga nokungazisebenzisi iincwadi zokusebenzela; abanye abantwana bayabathanda. Iincwadi zokusebenzela zinokuba luncedo ekufundeni ngokuzimeleyo xa ufundisa abantwana abaninzi kumanqanaba ahlukeneyo. Nangona kunjalo, ndiyakuthanda ukubukela umama abacebise izandla-kwimisebenzi yokudibanisa kwizifundo zabo zemihla ngemihla .
La maomama bahlala befumana unxana lwabo lolwazi olubuyiselwayo. Banovuyo kwaye banomdla wokuthintela ubomi babo kubantwana, babanike uthando lokufunda, kunye nokudala indawo ecebileyo yokufunda . Ndiyakholwa ukuba kufuneka ibe yinjongo ekugqibeleni ukuba ukhethe ukufundisa ekhaya.
Ndiyathemba ukuba andikudikibanga ngokupheleleyo. Oko akusiyo injongo yam. Ndifuna nje ukuba uqiniseke ukuba ucinge ngempembelelo ekukhethiweyo kumakhaya asekhaya kuya kuba nawe kunye nosapho lwakho. Kubalulekile ukuba ube nombono ocacileyo wento oya kuyenza ngaphambi kokuba uqale. Ukuba ixesha kunye neemeko azilungele intsapho yakho, kulungile ukuba ukhethe ukuba ungabikho ekhaya.
INgxelo yeNdwendwe nguKanan Danvers
Iimfuno zeNkxaso kwiZikolo eziPhakamileyo zaseKhaya
Ngowe-1918 iSpeyin Flu Pandemic
Funda Ngeentsika zaseHalloween eJamani
Imizekelo Yemimangaliso Yemizekelo - Imiboniso Yokuzama
Ngaba iSonto LamaKatolika Liye Lakholelwa Kwi-Purgatory?
Ziziphi iiNetherlands ezincinci eMelika?